Owebandla uthi umfowabo uyathinteka ekubulaweni kwamaphoyisa - Umbiko | News24
Owebandla uthi umfowabo uyathinteka ekubulaweni kwamaphoyisa - Umbiko
Johannesburg - Umholi weMancoba Seven Angels Ministry eNgcobo esifundazweni i-Eastern Cape‚ uBanele Mancoba‚ uthi unesiqiniseko sokuthi umfowabo omdala uThandazile Mancoba uyathinteka ekubulaweni kwamaphoyisa amahlanu esiteshini samaphoyisa eNgcobo ngoLwesithathu ngesonto eledlule, ngokusho kwemibiko.
Izindaba ze-SAFM zibika ukuthi uBanele Mancoba uthe umfowabo ubengahlali emagcekeni esonto ngaphambi kwesigameko sokudubulana namaphoyisa ngoLwesihlanu ebusuku.
“Bengingazi lutho ngezibhamu. Bengijabulela ukuthi ukhona. Bengingazi ukuthi ufike nezibhamu. Ngicabanga ukuthi ukwenze ngamabomu lokhu, ngoba uma ubulele umuntu, uzigcina kanjani izibhamu wazi kahle ukuthi ziyafuneka? Ngicabanga ukuthi ubekwazi kahle abekwenza. Okubuhlungu ukuthi inkinga uyishiye nami, yimina osekumele ayilungise.”
OLUNYE UDABA: Amalungu omphakathi abuthane enkantolo, ecaleni lokubulawa kwamaphoyisa
Izelamani zakwaMancoba ezintathu ziyingxenye yabantu abayisikhombisa abadutshulwe babulawa emagcekeni esonto.
Isigameko sokubulawa kwabo silandela esokubulawa kwamaphoyisa amahlanu ngoLwesithathu.
Kwebiwa izibhamu zamaphoyisa kulesi sigameko kanti kuthiwa zitholakale emagcekeni esonto.